Zvimwe zvakasarudzika zveE-commerce Technology | ECommerce nhau
Zvimwe zvakasarudzika zveE-commerce Technology
Izvo zvakasarudzika zviyero zveizvi internet yekutengesa matekinoroji, vakaratidza kuti zvimwe zvakawanda zviripo zvekutengeserana nekutengesa, sezvo paine seti ine simba yekudyidzana mameseji akagadzirirwa.
Ziva hunhu hwe eCommerce commerce izvo zvinoita kuti ive yakasarudzika system iyo iri kugara ichiwedzera nekutenda kune kugamuchirwa kwakanaka kwayakaita neruzhinji.
1 Nei zvigadzirwa zvemagetsi (kana eCommerce) zvichikosha nhasi
2 Hunhu hweCommerce tekinoroji
2.1 Kusvika pasirese
2.4 Universal zviyero
2.5 Kuita munhu uye kugadzirisa
2.6 Zvemagariro tekinoroji
2.7 Kuwanda kwemashoko
Nei zvigadzirwa zvemagetsi (kana eCommerce) zvichikosha nhasi
Sezvo chitoro chekutanga chepamhepo chakagadzirwa kune izvo nhasi musika weCommerce, makore mazhinji apfuura. Uye iyo shanduko yave yakanaka kwazvo, ichiwana kufambira mberi kukuru. Uye ndeyekuti vanhu vazhinji uye vazhinji, pachinzvimbo chekumisikidza chitoro, vanosarudza imwe paInternet nekutenda kubhenefiti yainayo: kugona kusvika kune vateereri vakawanda, kuve uko vashandisi vaita tsvagiridzo yavo, nezvimwe.
Mamirioni evamabhizimusi apedza kuve nekuvapo paInternet Uye izvo zvakabvumidza kuti izvozvi iwe unogona kuwana kuburikidza neinjini dzekutsvaga zvese zvigadzirwa zvaunoda, kunyangwe izvo zvawaisaziva kuti zvinogona kuvapo.
Nekudaro, eCommerce tekinoroji inogona kuve inoonekwa nezvinhu zvinoverengeka zvekutora hanya. Unoziva here kuti ndeapi? Tichakuudza ipapo.
Hunhu hweCommerce tekinoroji
Kana iwe uchitova nechitoro chepamhepo, kana kana iwe uri kufunga nezve kugadzira imwe, hunhu uhwu hunogona kukubatsira iwe kuti unzwisise kukosha kwechokwadi kwee-commerce. Saizvozvo, kwete chete zvichave nebasa izvozvi, asi zvinotarisirwa kuve iro ramangwana renyika, ine zvitoro chete pamhepo uye mashoma kwazvo epanyama (unogona kunge uchiona kuti izvozvi zvitoro zvishoma zviri kuvhurwa uyezve mabhizimusi epamhepo ari kuwedzera). Mupfungwa iyi, hunhu hunotsanangudza izvi zvinotevera:
Kunyanya pane uyu mukana unobatsira kubatana nepasirese kuitira kuti kutengeserana kutapure miganho yemiganhu netsika neunyanzvi hwakakura kwazvo mumitengo uye mukuyedza zvichienzaniswa nekutengeserana kwechinyakare. Nekuda kweizvi, saizi inogona kuitika yemusika uyu ichawedzera.
Yakabatana zvakanyanya nenzvimbo, kusvika kwepasirese ndechimwe chinhu chakakosha cheCommerce tekinoroji. Uye ndizvo izvo kukwanisa kuita zviitiko pasi rese, Nemhando dzakasiyana dzekubhadhara (Paypal, kuendesa kubhangi, mapuratifomu ekubhadhara, makadhi echikwereti, nezvimwewo) zvinokutendera kuti zvive nyore kune vashandisi kutenga kubva kwauri.
Kana kune izvo isu tichiwedzera kuti pane mukana wakawanda wekutumira zvigadzirwa, nekuti dai kare kwaingova neCorreos chete, kune zvakawanda zvimwe zvingasarudzwa izvozvi, nemakambani ekutakura, ayo anotumira zvinhu nekukurumidza uye zvakachengeteka, izvo zvinopa mufananidzo uri nani kune rako bhizinesi.
Mukutengeserana kwechinyakare, musika wakanaka inzvimbo yepanyama inoshanyirwa kuita kutengeserana. Kune rimwe divi, muCommerce mune kwese kwese, zvinoreva kuti inowanikwa chero kupi uye chero nguva. Naizvozvi, musika wacho unosunungurwa nekuti hauchazofanirwa kudzikiswa munzvimbo inooneka uye unobvumidza kutenga kubva kunyaradzo yeimba.
Mune mamwe mazwi, iwe uchave uine bhizinesi iro Izvo hazvina kuganhurirwa nenzvimbo uko maitirwo anoitwa, asi iwe unozogona kushandira nyika yese, kana kunyangwe pasi rese kana uchida. Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe une yekushongedza zvishandiso bhizinesi.
Kana iwe uine chitoro chemuviri, chinhu chakajairika ndechekuti iwe unongotengesa muguta rauri iwe, nekuti ndipo pavanoziva iwe. Nekudaro, uine eCommerce, urikuvhura nzvimbo yacho zvakanyanya, sezvo izvo zvigadzirwa zvaunotengesa zvinogona kutumirwa neposvo kana courier kune dzimwe nzvimbo dzenyika, kana pasirese, izvo zvinovhura vateereri vako zvakanyanya, uye iwe unowana zvimwe mabhenefiti, kunyanya kana bhizinesi rauinaro rakanaka.
Kusiyana nekutengeserana kwechinyakare, nzira mbiri dzekutaurirana pakati pevatengi nevatengesi zviri nyore kwazvo. Izvi zvinoreva kuti zvese izvi zviitiko zvinogoneka newebhusaiti imwe chete. Nekuve nehukama hwekudyidzana, pane zvakawanda kuzvipira kubva kune vese mutengesi nemutengi.
Set kutaurirana kuburikidza nechitoro chepamhepo chiri nyore. Uye ndeyekuti haisi chete yekutaurirana inowanikwa, asi kubuda kwemasocial network kwakavhura imwe nzira yekutaurirana pamwe chete nefoni uye email. Zvese izvi zvinobvumidza hukama hwepedyo, hungangoita sekunge raive bhizinesi remuno kutaura nevatengi varo (kunyangwe muzviitiko zvakawanda havaonane chiso nechiso).
Ichi chimiro chinoshamisa sezvo hunyanzvi hunyoro huri nyore kubatanidza kuti uzviite sezvo zvichizogoveranwa nemarudzi ese pasi rese. Naizvozvi, zvipingamupinyi zvakawanda kana zvipingamupinyi zvakaputswa, zvichiita kuti zvigadzirwa zvive zvakaomarara kudzivirira kunetsekana
Mupfungwa iyi, tiri kureva eCommerce yese inoshanda nenzira imwecheteyo, saka zviri nyore kwazvo kukwanisa kuenzanisa mitengo, tsananguro yechigadzirwa, nguva yekuendesa, nezvimwe. iyo inobatsira kutenga kune vashandisi.
Kuita munhu uye kugadzirisa
Mune ino kesi, uye zvakare seimwe yeakanyanya kukosha zvinhu mune ino neramangwana, iko kuita munhu uye kugadzirisa, ndokuti, kuti zvemagetsi zvekutengeserana zvinogona chinja zvichienderana nemushandisi kana mutengi zvaunofarira, zvakanaka kupa zvigadzirwa zvine hukama, zvichivaita kuti vatarise zvakanyanya zvinoenderana nezvinodiwa, kugadzirisa zvinoitisa, kupa macouponi ...
Muchidimbu, kugona kwezvitoro zvepamhepo kuchinja zvichienderana nezviri kutsvakwa nevatengi vavo kwavari.
Chitoro chepamhepo chinonyanya kushamwaridzana kupfuura vamwe, senge terevhizheni, redhiyo ... Nekuti mune ino kesi kune hukama hwakakura, kuwedzera kune icho icho chitoro pachacho chinogona uve mugadziri wezvako zvemukati izvo zvinozivisa vashandisi vako nezve zvigadzirwa kana dingindira reizvi. Naizvozvo, kunwa kwemukati kwakakoshawo sehunhu hweCommerce.
Mune ino kesi, isu tinoreva kune huwandu hweruzivo iyo, kuburikidza neCommerce, kana iyo Internet, inogona kuwanikwa nezve chimwe chigadzirwa. Kana ukateerera, angangoita ese eCommerce ane zvigadzirwa zvakafanana vanozvitengesa nerondedzero imwechete. Asi kune vamwe vanoratidza kufarira zvishoma zvine chekuita neruzivo rwavanopa kuti vape zvimwe, zvemhando yepamusoro, uye zvinoshanda. Izvi zvinobvumira kubatana kuri nani nevashandisi, pamwe nekuita sarudzo yakakodzera.
Nekudaro, kupa tsananguro refu uye dzinonetesa haisi nguva dzose iri zano rakanaka, kunyanya kana ivo vari vehunyanzvi kana vakaomarara kunzwisisa. Ndosaka zvichida vanhu vanokwanisa kudzikamisa ruzivo rwese irworwo vopa chinyorwa chinonzwisisika uye chinoshandawo kuita sarudzo.
Mune ino kesi isu hatisi kureva chaizvo kune mari inowanikwa neCommerce, asi kune hupfumi maererano nechigadzirwa. Uye ndezvekuti, kumwe kwekukanganisa kukuru kweCommerce kuri pakuti mutengi haakwanise kuona chigadzirwa, kana kuchibata kana kuchiedza usati watenga, ndosaka vazhinji vachida zvitoro zvepanyama pane zvepamhepo.
Dambudziko nderekuti izvozvi, nekuchinja uye kubvumira kudzoka, kuchinjana ..., muzviitiko zvakawanda pasina kufungira mushandisi, inovhura mukana wekuti "kuyedzwa", ndiko kuti, kugona kubatsira kusarudza izvo zvigadzirwa kunyangwe vasina kumbozviona kare.
Uye izvozvo zvinoitwa sei? Zvakanaka, nehupfumi hweshumo iyo yaunoda kuendesa. Uye ndezvekuti kwete chete zvinyorwa zvinogona kushandiswa, asiwo mifananidzo nemavhidhiyo kuratidza vatengi kuti chigadzirwa ndicho chaicho chavanoda uye vanga vachitsvaga kugadzirisa dambudziko ravo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zvimwe zvakasarudzika zveE-commerce Technology
ANGLE GUTIERREZ GERARDO akadaro
Chaindibatsira kwandiri kumubvunzo une chekuita nemutemo wekomputa
Pindura ANGULO GUTIERREZ GERARDO
Kutengesa kwemagetsi kunoshanda sei?